FJKM Ankadifotsy Lioka 4.1-13 : FAKAM-PANAHY / Mana isan'andro / Soratra Masina / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Lioka 4.1-13 : FAKAM-PANAHY03/01/2018 19:28
Nentin’ny fanahy. Tsy voalaza ny anton’ny nitondran’ny Fanahy an’i Jesoa Kristy tany an’efitra, fa ny fantatra dia feno ny Fanahy Masina Izy rehefa avy natao batisa (3.22). Miasa feno ao anatin’ny olona manana fifandraisana amin’Andriamanitra ny Fanahy Masina. Ity fitokanana tany an’efitra ity, dia azo heverina ho fotoam-panomanana : manoloana ny andraikitra goavana ho tanterahina.
Tsarovy koa ny mitokana eo anatrehan’ny Tompo. Ao Aminy isika no mahazo ny herim-panahy rehetra ilaina. Raha Zanak’Andriamanitra ianao. Tonga ny devoly, ilay efa voalaza hoe fanahy ratsy eny amin’ny rivotra (Efesiana 6.12). Fotoana nanao ahoana no nohararaotiny teto ?...
Ny hanoanana (2). Mety maka endrika maro io hanoanana io : ara-batana, ara-tsaina,ara-pitaovana...s.n.s. Nasisiky ny devoly teo amin’i Jesoa eto ny fahatsapana ho Zanak’Andriamanitra, toy ny midika hoe : “ ataovy ange, fa ho hitanao ny vokany e”
Nanohitra ny fakam-panahy. In-telo i Jesoa Kristy no nanohitra ny fakam-panahy nentin’ny devoly, ka manaitra ny mahita fa andinin-tSoratra Masina avy ao amin’ny Bokin’ny Deoteronomia no nampiasainy. Ohatra tsara alain-tahaka ho antsika no nasehon’i Jesoa eto : ny fampiasàna sy fampiharana ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainana an-davanandro.